ဂျက်စပန့်စ် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ – Gunners' Side
ဂျက်စပန့်စ် ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်အသင်းမှာ အငှားနဲ့လာကစားနေတဲ့ မစ်ဒယ်ဘရော့ကစားသမား ဂျက်စပန့်စ် ကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူကဘယ်သူများလဲ? သူ့ကိုခေါ်လိုက်ရင် အာဆင်နယ်အသင်းက ဘာအကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်မှာပါလဲ?
အာဆင်နယ်အသင်းဟာ အခုထိ ကစားသမားခေါ်ယူရေးမှာ လက်တွေ့ခရီးမရောက်သေးပါဘူး။ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ကာလပိတ်ဖို့ကတော့ ၂ ပတ်တောင်မလိုတော့တဲ့အခြေအနေပါ။ အာတီတာနဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းပစ်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ ဗလာဟိုဗစ်နဲ့ မယ်လို အကြောင်းနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေသလိုပါပဲ။
ဒီကြားထဲကနေမှ သူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကစားသမားအဖြစ် နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်နောက်ခံလူ ဂျက်စပန့်စ် ရဲ့နာမည်က သတင်းတွေမှာမြင်လာရပါတယ်။ The Mirror ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ အာဆင်နယ်တို့ဟာ သူတို့ရဲ့ ဂျပန်ကစားသမား တိုမီယာစု နေရာကို ပိုမိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ရည်ရွယ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီသတင်းတွေကိုအခြေခံပြီး ဘယ်လိုအရည်အသွေးတွေက ဂျက်စပန့်စ်မှာရှိနေသလဲ ၊ သူသာရောက်လာခဲ့ရင် အာဆင်နယ်အသင်းကို ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေကို Football London က စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
သူက အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် အရည်အသွေးရှိနောက်ခံအစွန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်မှာပဲ မွေးဖွားခဲ့တာပါ။ သူက တကယ့် ညာနောက်ခံကစားသမားစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လောလောဆယ်မှာတော့ မစ်ဒယ်ဘရော့အသင်းကနေ နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်အသင်းမှာ အငှားလာကစားနေပြီး စာချုပ်က ရာသီကုန်အထိ သက်တမ်းရှိပါတယ်။
အာဆင်နယ်က ဘာလို့ သူ့ကို လိုချင်ရတာလဲ။
နော်တင်ဟမ်ဖော်ရက်စ်က်ု ၁-၀ နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲမှာ ဂျက်စပန့်စ် ဟာ မိနစ် ၉၀ လုံးလုံးခြေစွမ်းပြကစားသွားခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်လူငယ်လေး မာတင်နယ်လီကို တိတ်ဆိတ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ပွဲလုံးမှာ အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေကို လိမ်ခေါက်ဖြတ်ကျော်ဖို့ ၇ ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ရာမှာ ၆ ကြိမ် အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပံတစ်လျှောက် လျှင်မြန်စွာနဲ့ အာဆင်နယ်ကစားသမားတွေကို ၃ ကြိမ်ကျော်ဖြတ်ပြီး ပြေးလွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မာတင်နယ်လီက သူ့ကို ပစ်ဒဏ်ကျူးလွန်ပြီး မတားဆီးခင်မှာ အိုဒီဂတ်ကို Nutmeg လုပ်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြေပြင်မှာ ၁၄ ကြိမ်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ၁၂ ကြိမ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ သိပ်ကိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ ကွင်းတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
တိုက်စစ်နဲ့ ခံစစ်စစ်စွမ်းရည်တွေကို အချိုးကျ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်ကစားသမားလေးဟာ တိုမီယာစုကို စိန်ခေါ်ဖို့အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ရွှေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိတိုမီယာစုရဲ့ အရံဖြစ်တဲ့ ဆဲဒရစ်နဲ့တော အတော်လေးကွဲပြားသူဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စပန့်စ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းလိုအပ်နေတဲ့ ပြည်တွင်းထွက် Home Grown ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။ အခြား အဂ်လန်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ နိုင်းလ်စ် နဲ့ ချိန်ဘာစ်တို့ကလည်း အာဆင်နယ်ရဲ့ ရေရှည် အစီအစဥ်မှာ ပါဝင်နေလား ဆိုတာ မသေချာသေးပါဘူး။
အာဆင်နယ် ဂန္တဝင်ကြီး အီယန်ရိုက်ကတော့ အံ့အားသင့်စရာခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ ဒီလူငယ်လေးနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“ ပွဲအပြီးမှာ သူနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကို သွားစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ “ နားထောင်ကောင်လေး .. မင်းက မစ်ဒယ်ဘရော့ကနေ အငှားလာကစားတယ်လို့ ငါသိထားတယ်။ အဲ့ဒီက အခြေအနေတော့ ငါသေချာမသိဘူးကွာ ..ဒါပေမယ့် ဘာလို့မင်းကအငှားထွက်ကစားနေရတာလဲဆိုတာ တော့ငါသိချင်တယ် .. နောက်ပြီး တစ်ခုပြောချင်တာက ဒီနေ့မင်းကစားသွားတာသိပ်ကောင်းတယ်။ ဒါမျိုး ငါမမြင်ရတာကြာပြီကွ ဆိုပြီးသွားပြောခဲ့တာဗျ .. “ ရိုက်ကတော့ သူ့ထုံးစံအတိုင်း အားရပါးရပဲပြောချလိုက်ပုံပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့နာမည်ကတော့ တစ်ပွဲထဲနဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေဆီရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ Cult of Calcio ကနေဖော်ပြလာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အရ အီတလီဖက်က အင်တာနဲ့ရိုးမားကလည်းသူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ လန်ဒန်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့လူငယ်လေးဟာ တကယ်ဖြစ်ထွန်းသွားမလား ၊ ခနတာ သတင်းအဖြစ်ပဲရှိသွားမလားဆိုတာကတော့ စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
Tags: Future, Transfer
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ် သတင်းများ (19Jan)
အမြင့်မားဆုံးပြောင်းရွှေ့ကြေးနဲ့ အာဆင်နယ် ရောင်းခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ ဘာဆက်ဖြစ်ခဲ့သလဲ – အပိုင်း ( ၂)